Umzala webe ingane eyoyibonisa isoka alikhohlisa ngokuthi ukhulelwe | News24
Umzala webe ingane eyoyibonisa isoka alikhohlisa ngokuthi ukhulelwe
Port Shepstone - Kuduma ikhanda kowesilisa waseMurchison, ePort Shepstone, ngesenzo sikamzala wakhe athi untshontshe indodana yakhe enezinyanga engu-9 ngoMgqibelo ngoba efuna ukuyihambisa esokeni lakhe abelikhohlisile wathi ukhulelwe.
UMnu Charles Nkonyeni onguyise wengane, uthi indodana yakhe intshontshwe ngumzala wakhe, uNkz Nqobile Nkonyeni, 19, kumanje akaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo nayo.
"NgoLwesihlanu ngibuye emsebenzini ntambama kukhona umzala wami waseGamalakhe, ongajwayele ukusivakashela.
"Sesiyolala ngoLwesihlanu ebusuku, ucele kunina wengane ukuyolala nayo ngamnqabela ngoba ngibona ukuthi isencane ukuthi ingalala ngaphandle kukanina. Ngimtshele ukuthi uzohlala nayo ingane kusasa uma sesiye emsebenzini," kusho uMnu Nkonyeni.
Uthi uvuke ekuseni ngoMgqibelo nonina wengane bahamba bashiya indodana yakhe nodadewabo - okuyibona abayigadayo uma besemsebenzini nonina wengane.
Utshele ILANGA ukuthi uthole ucingo esemsebenzini emini, udadewabo emtshela ukuthi ingane nomzala wakhe kabekho, kabaziwa ukuthi bashonephi. Uthi uzamile ukufonela umzala wakhe kodwa ucingo lwakhe beselungasangeni seluvaliwe.
"Ngibuye emsebenzi odadewethu sebelubikile udaba emaphoyiseni ngokunyamalala kwakhe nengane," kusho yena. Uthi omunye wodadewabo umtshele ukuthi uNkz Nkonyeni uthe usaphuthuma edolobheni kodwa uzohamba nayo ingane, kukhona umuntu aphuthuma ukumhambisela isikhwama.
Lo dadewabo kaMnu Nkonyeni uthi umsolwa umdonse ngendlebe wathi angamcebi ukuthi ubehambe nengane ukuya edolobheni engacelanga. Uthi baze bayolala ngoMgqibelo ucingo lwakhe luvaliwe.
OLUNYE UDABA:INGOSI: Ake sibheke udaba lwengane ezalelwe ekhaya
"NgoMgqibelo emini uthumele umqhafazo exolisa ngokuhamba nengane engashongo wasithembisa ukuthi uzobuya ngalo lolo suku. Amaphoyisa athole ukuthi ucingo lwakhe beludonsa eMgungundlovu ngesikhathi esifonela, okukhombisa ukuthi ubeqhubeka nohambo lwakhe.
"Ubuthongo kabusehli kimina nonina wengane selokhu idukile. Okusisabisa kakhulu wukuthi abantu sebedayisa ngezicubu zezingane benza imithi.
"Okusenza sikhathazeke kakhulu wukuthi kungani engacelanga kithina bazali bengane uma efuna ukuyihambisa esokeni lakhe kunokuthi ayintshontshe,” kubalisa uMnu Nkonyeni.
Uthi umzala wakhe akathathanga lutho lwengane ngesikhathi ehamba nayo - ikhadi layo lomgomo nezimpahla zayo konke ukushiyile. "Sicela noma ngubani ongaba nolwazi ngoNqobile ukuba asize axhumane namaphoyisa aseMurchison," kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi kuvulwe icala lokulahleka kwengane esiteshini samaphoyisa eMurchison.
Uthi amaphoyisa aphansi phezulu athungatha umkhondo kamsolwa othathe ingane.